Shaqada & Gaarsiinta Columbus, OH | Caafimaadka PW
Shaqada & Gaarsiinta Columbus, OH
9 Adeegyada Uurka & Uurka
Waxbarashada dhalmada ayaa adiga iyo lammaanahaaga ka caawinaysa inaad yeelataan uur farxad iyo caafimaad leh iyo umulid. Inkasta oo dadka qaar ay marka hore diidaan inay galaan fasallada dhalmada, badankood waxay u arkaan inay aad uga helaan fasalladaas wax weyn.
Ururo badan ayaa bixiya koorsooyin kala duwan, oo ay ku jiraan fasalo kuwa og inay qalliin ku sameynayaan. Waxaan si adag ugu boorinaynaa bukaanada oo dhan inay soo xaadiraan mid ama in kabadan koorsooyinkan. Fadlan saxiix goor hore, maxaa yeelay fasalladaani waa kuwo caan ah oo si dhakhso leh u buuxiya.
Dumar badan ayaa u baahan nooc ka mid ah xanuun joojiye inta foosha iyo dhalmada, gaar ahaan ilmaha ugu horreeya. Tababbarka waxbarashada dhalmada wuxuu kuu oggolaanayaa inaad yareyso qadarka daawada aad u baahan tahay, laakiin inta badan waa lagama maarmaan in la isticmaalo xoogaa daawo ah. Haddii si macquul ah loo isticmaalo, noocyada suuxdinta badankood waxay badbaado u leeyihiin adiga iyo ilmahaaga.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad yar inta lagu jiro foosha, waxaan kugula talineynaa qadar yar oo ah Nubain, oo ah maandooriye. Haddii aad u baahan tahay gargaar dheeraad ah, waxaan inta badan kugula talinnaa baloogga epidural'ka.
Ma isticmaalno suuxdinta "hurdada fiidkii" mana u isticmaalno suuxdinta guud foosha dhalmada.
Haddii aad ku umusho ilmahaaga qalliinka, waxaan doorbideynaa suuxdinta laf-dhabarka ama laf-dhabarka. Xaaladaha degdegga ah iyo dhibaatooyinka qaarkood ee uurka, suuxdinta guud ayaa laga door bidaa.
Kormeerayaasha Uurka Elektaroonigga ah
Waxaan aaminsanahay in kormeerayaasha uurjiifka elektiroonigga ah ay gacan ka geysanayaan xaqiijinta natiijada ugu wanaagsan ee foosha, gaar ahaan uurka khatarta sare leh. Lamaanayaal badan ayaa ogaada in kormeeraha uu yahay mid kalsooni leh, qaarna waxay u adeegsadaan inay ka caawiyaan farsamooyinkooda neefsashada Lamaze.
Waxay kuxirantahay bukaan socodka, kormeerayaasha gudaha ama dibada waa la isticmaali karaa.
Goorma La Wacayo
Nala soo hadal marka fooshaadu ay u dhaxeyso 5 illaa 6 daqiiqo oo ugu yaraan ay u socoto 60 ilbiriqsi. Haddii aad uur leedahay wax ka yar 32 toddobaad, na soo wac haddii fooshaadu kugu dhacdo, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaad fooshii ku soo degto.
Nala soo hadal haddii biyahaagu jabaan, xitaa haddii aad daadinaysid qadar yar oo ah dheecaanka amniotic.
Foosha iyo dhalmada FAQs
Sidee ayuu foosha u dareemayaa?
Maroojintu waxa ay dareema in ilmo galeenkaagu ku adkaado oo ka soo bilaabmo xagga sare ka dibna u soo ifbaxaya ilaa hoose. Waxa aad dareemi doontaa in ilmo-galeenkaaga oo dhami uu engegan yahay oo qabsanayo. Xanuunku wuxuu u dhexeeyaa mid fudud ilaa dhexdhexaad wuxuuna socon karaa ilaa 60 ilbiriqsi. Dumarka qaarkood ayaa laga yaabaa inay dareemaan cadaadis dhabarka ama miskaha ah marka lagu daro foosha.
Ma iga bixi doonaa siilka ama qalliinka dhalmada?
Jawaabtu waxay ku xiran tahay xajmiga iyo booska ubadkaaga, anatomy miskahaaga, haddii aad hore ugu soo baxday qalliinka qalliinka, iyo haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo soo baxa xilliga foosha. Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka waxay dib u eegi karaan labada ikhtiyaar inta lagu jiro ballan waxayna kaa caawinayaan inaad gaarto go'aanka ugu fiican adiga iyo ilmahaaga.
Maxay noogu doorteen foosha iyo dhalmada?
Waxaan fahamsanahay in foosha iyo dhalmada ay adiga iyo qoyskaaga u noqon karaan waqti aad u qiiro badan. Kooxdayadu waxay ka kooban yihiin khabiiro OB/GYNs ah iyo in ka badan oo ku takhasusay daryeelka haweenka marxalad kasta oo noloshooda ah. Laga bilaabo booqashadaada ugu horreysa ee dhakhtarka haweenka ee dhalmada iyo daryeelka dhalmada ka dib, bixiyeyaashayada Columbus, OH, waxay bixiyaan adeegyo naxariis leh oo dhammaystiran.